Dhallaanka Kelinimada ku Yimaada Iswiidhen oo Kor u Kacay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhallaanka Kelinimada ku Yimaada Iswiidhen oo Kor u Kacay
La daabacay söndag 15 april 2012 kl 22.43
Dalka Iswiidhen ayaa kaalinta koowaad kaga jira marka loo barbar-dhigo dhammaan waddammada Yurub dhaca dhallaanka magan-gelyo doonka ku yimaada ee aaney la socon waalidiintood ee sannaddadii 2010 - 2011, sida ku cad war-bixin ay soo saartay hayadda IGC.
Iney dhallaankaa badankood helaan deggenaansho magan-gelyo doon ayaa sabab u noqon karta iney dhallaan badani ka soo door-bidaan imaanshaha dalkan, hase yeeshee waxay caqabadi ka taagan tahay iyada oo ay jirto baahi ballaaran ee loo qabo sidii goobo deggenaansho oo ku filan looga heli lahaa degmooyinka dalka.
- Waa in dhallaanka la hor-mariyaa. Waxaa jira baahi ballaaran ee loo qabo goobo dhallaankaasi ku noolaadaan. Mana ahan mid hoos u dhaceeysa tirada dhallaanka, sida uu sheegay Oskar Ekblad, ahna madaxa laanta tijaabinta dacwadda magan-gelyada ee hayadda socdaalka.
Labadii sannadood ee ugu dambeeyey ayey dalkan magan-gelyo-doon u yimaadeen dhallin-yaro kelinimo ku yimiday oo tiradoodu gaarsiisan tahay 5 050, halka kaalinta labaad uu ku muteeystay dalka ingiriisku oo ey magan-gelyo ka dalbadeen dhallaan tiradoodu gaarsiisan tahay 2 641 iyo dalka Beljimka 1 941.